Ọ dị mma ka nwa agbọghọ jiri igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Girlsmụ agbọghọ ndị na-agba ịnyịnya ígwè - otu esi edozi
Girlsmụ agbọghọ ndị na-agba ịnyịnya ígwè - otu esi edozi
Ọ dị mma ka nwa agbọghọ jiri igwe kwụ otu ebe?
Ihe omumu ohuru na egosina-agba ịnyịnyaon sadulu mgbe nile emerụ mmekọahụahụikeidịghe ke owo kpọt, ediụmụ nwanyịỌzọkwa. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anyana-agba ịnyịnya ígwèma ị bụnwanyi, ị na-achọ ịnụ akụkọ ọjọọ: Ọ nwere ike imebi agụụ mmekọahụ gịahụike. Ọhụrụ ọmụmụ lere anya na ihe banyereanyịnya igweemetụta ọnya na ụfụ naụmụ nwanyị.Eprel 5 2012
isiokwu a bụ maka ụmụ nwanyị gbaghara ụmụ nwoke dị ka nwanyị ọ nwere ike ịbụ obere ihe ịma aka ịnya igwe kwụ otu ebe mgbe ụfọdụ ọdịdị na-agbaji ihe atụ ụmụ nwoke dị oke mma m nọ ebe a iji nyere aka n'isiokwu a, a ga m enye gị ndụmọdụ na aghụghọ ole na ole ị nwere ike na-agba ịnyịnya ígwè obere obere karịa nkasi obi karịa nne gị Malite na onye na-eche banyere nkasi obi nke igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ahụ́ erughị gị ala na mpaghara a, ọ ga-esiri gị ike ịnụ ụtọ igwe kwụ otu ebe. Enweghi ihe jikọrọ ya na nke ha niile na-arụ ọrụ zuru oke maka otu onye ma ọ nwere ike ịbụ nhụjuanya zuru oke maka onye ọzọ, mana enwere ọtụtụ oche dị iche iche dị, gụnyere ụfọdụ jikọtara okike.
Nwere ike ịnwale ịnyịnya ole na ole iji chọta nke na-arụ ọrụ maka gị. Elegharala gị anya n'ụzọ ị ga-esi jisie - ihe okike dị ka nke a, ma ọ bụ ezigbo ihe ndozi, nwere ike dịrị ụfọdụ ụmụ nwanyị mma; bum ọ bụla na-afụ ụfụ oge mbụ ị na-agba ịnyịnya ígwè, mana ka ị na-eyikwu, ọ na-adị obere na ọ na-ewute gị mgbe anụ ahụ gị na-eme ka ọ mara gị ahụ, tụkwasa m obi, nke abụọ, ekwela ka ụmụ nwoke na-agba ịnyịnya ígwè mee ka ị pụọ Ọmụmaatụ, ụfọdụ ụmụ nwanyị na-ahọrọ nịịka ụmụ nwoke ma ọ bụ ịnyịnya nwoke Ezigbo ịnyịnya ịgba ịnyịnya ga-eme ka nkasi obi gị dị oke ọnụ Ngwaahịa apụtaghị na ọ ka mma ma ọ bụ maka Ọ na-arụ ọrụ, ọ dabere na mmasị onwe gị Sụchaa nịịka gị mgbe ị na-agbago ma jiri ya chamois cream to breed ma ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ọtụtụ na mmiri ozuzo ọ nwere ike ịba uru itinye ego na ụfọdụ mudguards iji mee ka ihe niile na-agbapụ n'ụkwụ gị ma gbanyụọ inwe shami na-adịghị atọ ụtọ, mana na Wales, nsogbu ahụ abụghị eziokwu n'ihi ọ dị mma mgbe niile mgbe ụmụ nwanyị na-enweghị ihu igwe na-achọpụta na ọ ga-adịrị ha mfe ịnọdụ ala karịa na sadulu ka nrụgide na nrụgide gị na obere nrụgide na ebe ndị nwere mmetụta ọsọ ọsọ ghara ịgwụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na Inwe nkasi obi na igwe kwụ otu ebe nwere ike ịba uru. igwe kwụ otu ebe dabara Y ị kwesịrị inwe ike ịma otu esi agbanwe ọnọdụ gị Chee echiche banyere ebe nrụgide dị n'oge na mgbe ọ bụla na-agba ịnyịnya Iji mee nke a, kpalie sadulu gị azụ ma ọ bụ gbatịa ya ntakịrị. Ọ dị mma iburu multitool mgbe ọ bụla ị na-agba ịnyịnya ka ị nwee ike ịgbanwe ọnọdụ gị mgbe ị na-apụ.
Nke a nwere ike bụrụ nke ọtụtụ ndị na-achọpụta siri ike ma e jiri ya tụnyere mgbe ị nọ n'etiti enweghị ebe na ịchọghị ihe ọ bụla dị njọ karịa iwepụ oge anọ iji gaa ụlọ ịwụ ahụ, ọkachasị n'oge ọnwa oyi chọrọ ị ga-agagharị Enweghị m mkpa ịgba ọsọ E nwere ụzọ dị iche iche dị iche iche iji zere ịnwepụ akwa gị niile, nke mbụ nwere obere mkpịsị ụkwụ na-enweghị eriri eriri nke ga-eme ka ọ dịrị gị mfe mana echegbula ma ọ bụrụ na ị nwere Akwụkwọ Nsọ straps enwere ole na ole ndị ọzọ Aghụghọ ị nwekwara ike ịnwale kwa, nke mbụ bụ n'ezie nke m welitere n'okporo ámá site n'aka onye otu egwuregwu ochie m ebe ị na-agbagharị obere ụkwụ gị wee dọba ya n'akụkụ. Agbalịbeghị m nke a na maka ihe doro anya na agaghị m egosipụta ya taa, ihe ọzọ bụ ịdọrọ obere uwe gị n'okpuru uwe gị ka ị wee gaa n'okpuru uwe gị Sere otu akụkụ nke obere mkpirisi ala wee akuku nke ozo ma mgbe ahu akwa nkpuru ala nwere onwe ha gbadata, mana amaghi m uzo m ga esi weghachite ya n'eweghipu uwe m na ya ka a na-aru oru na ufodu nkpirisi ka a na-emeputa maka ndi nwanyi nwere zipa na azu ma obu ihe mgbochi na-eme ka ọ dịrị ụmụ nwanyị mfe ime ka ọdịdị dị iche na-agba ịnyịnya egwuregwu dị mma abụghị ihe m hụrụ n'anya karịa iso ndị enyi m na-a andụ kọfị na kọfị na achicha dị mma, mana ọ dị ezigbo mkpa ịnweta obere ihe iri nri na ị drinkụ ihe ọ andụ drinkụ na mgbe ọ bụla na igwe kwụ otu ebe m na-erikarị oge ọ bụla nkeji iri anọ na ise dịka ogwe ike ma ọ bụ banana ka ọ ghara ịgwụ gị ike mgbe ị nwere klọb ọdụ ụgbọ mmiri mpaghara, gịnị kpatara na ị gaghị aga wee sonye otu nzukọ ha ma ọ bụ otu ịnyịnya ha dị ka nke a, otu anyị nwere ezigbo enyi ya mere, echegbula na enwekwara klọb ịgba bọọlụ maka ụmụ nwanyị toomy mum bidoro ịgba ịnyịnya ígwè afọ ole na ole gara aga ma ọ sonyeere n'otu n'ime ha Otu ndị na-achọ inweta ọtụtụ ụmụ nwanyị na igwe kwụ otu ebe, n'agbanyeghị ụdị ọkwa nka ha, na ọ hụrụ n'anya kpamkpam ịta ahụhụ n'ihi na ọ bụghị m na-atụ ụjọ, mana ọ bụ ụzọ dị mma iji meziwanye ngwa ngwa na-enweghị ya n'ezie iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị nweta igwe ma ọ bụ ọkpọ onye otu ga-enyere gị aka mgbe niile, ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ ịgba ịnyịnya ígwè, gbalịa gbalịa ma chọta ụzọ ụgbọ ịnyịnya na-enweghị ụgbọ ala dị ka nke a iji wulite obi ike gị na ume na-enweghị nchegbu gbasara okporo ụzọ ma ọ bụ ụgbọ ala, mgbe ị nwere nkasi obi, ị nwere ike ịdaba n'okporo ụzọ ma mee nnukwu ugwu n'okporo ụzọ, braid ma ọ bụ tinye ya na ogbe dịka nke a maka uru ikuku na mgbe ị na-apụ, cheta isoro ndị ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị kerịta ebe obibi gị ka ha wee mara mgbe niile na ị nọ n'ọnọdụ Daalụ maka ikiri ha niile, nwee olileanya na isiokwu a nyeere gị aka ị ụfọdụ Atụmatụ na usoro. Ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ọ bụla nke aka gị nke m na-ekwughị banyere ya, biko kọọrọ anyị ha na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a
Kedu ihe ị kpọrọ onye na-agba igwe?
Ọ bụrụị na-agba ịnyịnyana 'igwe, ”Yourgbọ gị nwekwara ike ịdịakpọna 'igwe kwụ otu ebe. 'Gịnwere ike ịbụakpọonye “biker,” “onye na-agba igwe,” ma ọ bụ “onye na-agba ígwè.”Ọgọst 23 2019
>> Courtlọikpe: Hey ụmụ okorobịa, enwere m enyi m Brian ma anyị na-ekwu maka ịgba ịnyịnya ígwè wee sị, 'Ọ dịbeghị mgbe m gara ịnyịnya igwe' ma ị maara na m dị ka, 'wow', dịkwa mma. Nke a bụ ihe dị jụụ, anyị ga-akuziri gị etu ị si mara na anyị bidoro ịrụ ọrụ na ya. Mana echere m na ọ ga-adị mma ịme edemede ma ọ bụrụ na gị onwe gị ma ọ bụ onye ọzọ na-agba mbọ mụta ịgba ịnyịnya ígwè n'ụzọ dị mfe, mana enwere ụfọdụ isi ihe iji chọpụta.
Ya mere, nke a bụ Brian, hey enyi. Malite >> Brian: Hey >> Courtlọikpe: Ah, ihe banyere igwe kwụ otu ebe ọ nọ na ya ugbu a dị ezigbo mma, ọ bụ igwe kwụ otu ebe. Ya mere, lee ihe a na-akpọ ọkpọkọ elu, ọ dị ezigbo ala.
nkwado iwu arụmọrụ
Site n'ụzọ, a na-akpọ nke a ọkpọ ala. Nke a bụ ndụdụ n'ihi na ọ dị ka ndụdụ na wiil na ihe niile. Nke a bụ azụ cassette na Kwadobe na e nwere ndị n'ihu yinye.
Ọ dị mma, yabụ enwere akụkụ nke igwe kwụ otu ebe. Akụkụ ọzọ dị ezigbo mkpa bụ brekị. Ya mere, ndị a bụ ndị na - agba ọsọ breeki, ebe a, ha na - adọpụkwa calipers ndị na - etinye pad ahụ na kọntaktị ahụ.
Bikfọdụ igwe kwụ otu ebe nwere diski breeki na ihe ndị ọzọ, mana nke ahụ ga-adị mkpa. Mgbe ị mụtara ịgba ịnyịnya ígwè, ị ga-achọ igwe kwụ otu ebe nke ga-adaba adabara gị ka ọ dịrị gị mfe iguzo n’elu ya. Hụ otu ụkwụ ya si daa n’ala.
Nke a bụ ọnọdụ dị mma, ọ naghị anwa anwa ị maara, iguzo n'elu eriri ya ga-ada n'ụgbọala ahụ.
Na n'ezie ọ ga-eji brakes ndị ahụ emechaa mgbe ọ malitere ịmụ ihe. Um, agbanyeghị, otu ị si akụziri ụmụaka ka ịgba igwe kwụ otu ebe ugbua bụ ịnwe obere kickbikes ndị a. Ha enweghị ọbụna pedal! Ihe ị na-eme bụ ịnọdụ ala n’oche ebe ọ kwụ ọtọ ma jiri ụkwụ gị na-asọgharị.
Nke a na - enye igwe kwụ otu ebe ntakịrị ọkụ, nke ahụ dịkwa mkpa n’ihi na ọ na - enye gị nguzozi. Ma mgbe ahụ ọ na-adị ka ọ kwụsiri ike 'gaa n'ihu ma gbaa Brian ntakịrị wee tinye ụkwụ gị' Ka anyị hụ otu ọ ga-esi bulie ụkwụ ya otu ahụ? Echere m na, ọ naghị azọ ụkwụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, mana ọ na-enwe echiche nke itule. Ma lee, ọ bụrụ na ị gbalịrị ịtụgharị Brian ma ị daa, ị nwere ike ịtọgbọ ụkwụ gị mfe.
Okwesighi ịda ma ọlị! N'ezie o nwere okpu agha ya. Gịnị mere na ị gaghị echigharị? Ee, lee ka o si etinye ụkwụ aka nri ya n'ụzọ dị mfe. Ya mere ọ na-amụta nguzozi na nke ahụ bụ nzọụkwụ mbụ mgbe ị na-achọ ịmụ etu esi agba igwe kwụ otu ebe.
Oh, gaa n'ihu ma jigide Brian ebe a, ka anyị gaa. Ọ naghị agba ọsọ ọsọ ọsọ nke nwere ike iji breeki ya, ọ nwere ike itinye ụkwụ ya ala, ọ bụrụ na ọ ọsọ ọsọ ọ ga-amalite brakị n'ihi na nke a bụ ụdị igwe kwụ otu ebe ị nwere ike ịla azụ. Yabụ ebe a, gịnị kpatara na ị gaghị ewere nke gị ị hụrụ ka ọ na-agbada otu ahụ? Um, ee, naanị kpalie ụkwụ gị, aga m, ee lelee nke a.
Offọdụ n'ime ịnyịnya ígwè nke ụmụaka na ngwongwo mgbe ị laghachi azụ nke ahụ bụ breeki gị, mana nke a bụ ihe na-atọ ụtọ. Ya mere, ị maara, ọ ghaghị ịmalite ime ka ị nabata ya iji were aka ya wee rute lever brek. N’elu igwe kwụ otu ebe a, aka nri kwụ ọtọ na - eme ka brake dị n’azụ.
Ma nke ahụ bụ n’ezie ihe kacha mma breeki na ị nwere ike ịda. Um, ọ bụrụ na nke ahụ amalite slide ị nwere ike ịdaba mgbe azụ azụ, ị nwere ike ịdọrọ ya n'azụ gị, ị ga-enwe oge kachasị mfe iji kwado ya, yabụ, ihe ọzọ Brian ga-eme bụ ịkụzi ihe, kama ọ bu nání otù ukwu. Ọ ga-etinye ụkwụ ọzọ na pedal.
You hụrụ nke ahụ? Thatkwụ ahụ ga-anọkarị na ala. Nke ahụ pụtara na ọkara nke nguzozi ya apụla; ọ nwere ike ịdabere na ụkwụ ọzọ ya ịkụ. Nke a ga - enyere ya aka ije ije ọsịsọ ma ọ ga - emekwa ka ọ dị mkpa ka ya na ahụ ya dịrị, ọ bụghị ụkwụ ya, ọ dị mma? Ọfọn, nke ahụ dị mma, ị hụrụ, aka gị dị na breeki, nke ahụ dị mkpa n'ihi na anyị na-enwekarị ntakịrị nkukota na ụgbọ ala ebe ahụ, na-amụta banyere ịnya igwe ma chefuo na 'oh, m ga-agbaji', yabụ gịnị mere na ị brian, soro m.
Ọ dị ka ụkwụ skuta, otu ụkwụ biliri na ụkwụ nke ọzọ na-agba. Biko, ị maara, anyị na-eme nke a n'okporo ụzọ na-anaghị arụsi ọrụ ike ya mere ọ dị mma nchekwa. O nweela okpu agha ya.
Ya mere lelee nke a! Ọ na-agba igwe ugbu a ugbu a. Ọ naghị azọ ụkwụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ na-atụgharị atụgharị.
Gaba ma gbajiere m Ebe ahụ ka ọ ka na-eji ụkwụ ya ntakịrị, mana ọ na-eji brek. N'ihi ya, ọ na-amalite nsinammuo gị mkpa iji igwe kwụ otu ebe. Dịkwa ka, n'ụzọ nkịtị 'ogologo oge ole ka ọ malitere kemgbe ị malitere ịmụ, Brian?' Malite >> Brian: 20 nkeji >> Court: '20 nkeji 'Ya mere, anyị na-na na na na na na na n'ihi na a mgbe eme na m kpebiri iji igwefoto.
Ma nke ahụ mara mma dị egwu, dịka na nkeji iri abụọ ị nwere ike ịkwọ ụgbọ mmiri. Ọzọkwa, echere m na ọ dị ezigbo mkpa ịmalite inwe oke igwe kwụ otu ebe. Ma wee mepee mmuo ndị ahụ .N'ihi 'ị dara?' Malite >> Brian: Mba >> Courtlọikpe: Mba, ọ daghị ma ọlị.
Enweghị ọkọ, ụjọ atụghị, otu esi edozi. Know maara na ọ na-amụ ihe! Are nwere ntụsara ahụ iji masị gị, tinye ụkwụ nke ọzọ na pedal wee gbalịa n'ezie pedal? Ee! Ka anyị gaa nke a bụ nke mbụ, nke a bụ ihe mbụ Brian! eji brekị, anyị ga-eme breeki.
Hụ na o nwere mmuo maka ụkwụ. Lelee nke a! Odi nma, weghachi ya. Yep, mara ezigbo mma! Ị mere nke ọma
Hah a! Ka anyị gaa, dịkwa mma, lee anya. 'Anyị ka na-ewuli omume ndị a. Mana, ị mara, anyị ji nkeji ise.
Nke a bụ nkeji ise nke ị ga-esi aga igwe kwụ otu ebe. Ikike igwe kwụ otuzi ọzọ, na-eme nguzozi na-enweghị ịpị ụkwụ, na-eme nke ọma karịa site n'ịwelite otu ụkwụ elu ma jiri nke ọzọ dị ka skuta wee na-eme brakị. Na site ebe ahụ ị ga-ebufe ịnyịnya ígwè.
Ya mere nwee anụrị, jide n'aka na, kpuo okpu agha gị na ihe niile ahụ, ee! tinye ebe ahụ. Nke a bụ n'ezie ezigbo ụzọ iji gafere. Ọ dị mma, gbasatara obodo, ma bụrụ naanị ọ ofụ.
10 AkwaOkwu igweguoguiji kpalie gị ime ihe
Yabụ ka anyị jiri losokay, yabụ ihe mbụ m chọrọ ikwu maka ya bụ okwu igwe kwụ otu ebe maka n 'ụlọ akwụkwọ, dịka onye mmụta Bekee, ikekwe ị mụtara ịgba igwe.
Ugbu a ị nwere ike ịsị igwe kwụ otu ebe, mana ugbu a ọ bụ okwu ochie ejiri mara na ị nwere ike ikwu na Downton Abbey ma ọ bụrụ na ị maara ihe ngosi TV a. Ọtụtụ mmadụ na-ekwu igwe kwụ otu ebe. Ọ na-amasị m ịgba ịnyịnya ígwè m ebe a na Germany n'ihi na e nwere ọtụtụ ụzọ igwe kwụ otu ebe.
Nke ahụ bụ akụkụ nke ụzọ nke pụrụ iche maka igwe kwụ otu ebe, Ọ dị mma, yabụ nke a bụ ahịrịokwu na-ezighi ezi. Mgbe ị nụrụ ka mmadụ na igwe kwụ otu ebe gị na-ekwu, mana aha gị na-ebelata ka ọ bụrụ 'yer', yabụ ndị mmadụ na-ekwu 'n'ụgbọ ịnyịnya ígwè gị' na nke ahụ pụtara, dịka ọmụmaatụ, ịjụ arịrịọ. Mgbe Dylan na-asị, 'Hey Rob, enwere m ike ịgbazite otu narị dollar'? na gị igwe kwụ otu ebe! ”Nke ahụ pụtara mba.
Pụọ! Ahịrịokwu na-esote bụ 'ịlaghachi na igwe kwụ otu ebe gị', yabụ ihe pụtara n'ụzọ nkịtị bụ mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè gị ma ị daa, ị na-asị 'echegbula' ị ga-ebili ma ị laghachite na igwe kwụ otu ebe gị mana ihe atụ pụtara bụ mgbe ị nwee nsogbu ma ọ bụ ihe ọjọọ mere na ịkwesịrị ịkwụsị. Ọ DỊ MMA. Stop kwụsị, ma ị laghachi ya.
Get laghachi na igwe kwụ otu ebe. Na-esote ahịrịokwu bụ “ọ dị ka ịnya igwe kwụ otu ebe” na a na-eji na-akọwa ihe ị na-agaghị echefu echefu. Eleghi anya ị mere ya dị ka nwatakịrị, ị meebeghị ya ogologo oge, mana hey 'ọ dị ka ịnya ịnyịnya ígwè' - echefula nke ahụ, dịka ọmụmaatụ.
Kedu ihe bụ ezigbo ihe atụ nke ahụ? Ndewo, alaghachitela m ugbu a na mụ, echere m ihe atụ mgbe m bụ nwata mgbe m na-amụ etu esi arụ ụgbọ elu akwụkwọ ma ugbu a anaghị m arụ ụgbọ elu akwụkwọ mgbe mgbe kama ọ bụrụ na ị jụọ m ka m mee ụgbọ elu akwụkwọ. enwere m ike ime ya na ekwesịghị m ile ya anya, Otu esi eme ya, enwere m ike icheta na ịsị na ịwu ụgbọ elu akwụkwọ 'dị ka ịnya igwe' Ozugbo ị mụtara ka esi eme ya, echefula ya, ị hụrụ? Ọ dị mma, ahịrịokwu na-esote bụ, azụ na ịda ụda) Iji tọọ igwe kwụ otu ebe na ngwaa bụ 'ịpịgharị'. N’ihi ya, ịlaghachi pụtara ịla azụ iji laa azụ. Nkọwa ihe atụ bụ mgbe ị na-eme mkpebi wee gbanwee obi gị kpamkpam wee 'laghachi azụ' yabụ ezigbo ihe atụ nke a bụ Theresa May n'isi ụtụtụ dị ka Mịnịsta Ala, na-ekwu na agaghị m enwe ntuli aka ndị omeiwu mana emesịa ọ na-aga n'ihu Laa azụ ma kwuo na ị maara ihe anyị ga-enwe na ntuli aka izugbe.
Ekwenyesiri m ike na ọ na-akwa ụta maka mkpebi a. Ekwenyesiri m ike na ọ na-akwa ụta maka ịkwụsị. Ahịrịokwu na-esote nke na-ezo aka na igwe kwụ otu ebe bụ 'O buru oke ibu ịgba ịnyịnya igwe' ma anyị jiri nke a kwuo maka ụmụ ahụhụ mana ọ na-abụkarị ududo.
Ọ bụrụ na ị hụ ududo kachasị ukwuu, ị nwere ike ịsị, whoo-ha, 'Nke ahụ buru ibu iji gbaa igwe kwụ otu ebe.' You cheghị na m kwesịrị ịkọwa nke a? Ọ dị mma, ahịrịokwu ọzọ metụtara igwe kwụ otu ebe bụ 'ịgbagharị n'efu', ọ bụ ezie na Freewheeling pụtara na ị na-agbago gị ala na igwe kwụ otu ebe na-aga ngwa ngwa nke na ị ga-ewepụ ụkwụ gị na pedal na freewheel nke ahụ bụ ihe ọ pụtara. Ma ihe atụ pụtara bụ mee ihe na-enweghị nchịkwa na-enweghị nduzi ma ọ bụ ntuziaka, dịka ọmụmaatụ n'otu nkuzi Bekee onye nkuzi gị nwere ike ịhapụ gị ka ị nwee mkparịta ụka n'efu, nke pụtara na onye nkuzi agaghị eduzi mkparịta ụka gị, onye nkuzi agaghị ajụ gị ajụjụ, onye nkuzi meriri 'enyeghị gị ntụziaka ọ bụla, onye nkuzi na-ahapụ gị ka ịnwe mkparịta ụka n'efu, ị nwere ike ikwu maka ihe ọ bụla, dịka Ha chọrọ gị
Isnye bụ nwa agbọghọ n'ụgbọala?
AKW AKWỌ vidiyo nke na-eme gburugburu na ntanetị nke nwere nnukwu ajụjụ. O bu nzuzu ma sie ike ile. Vidio a na-egosi obere nwatakịrị na-egwu bọọlụ na ụmụ nwanyị nwanyị abụọ na-akwọ ụgbọ ala, MA NKỌRAY NA-EKWU NDL ỌHLR TO, KWES ONER ONE HW Otu n'ime THEmụ agbọghọ ahụ, KWAA HA LADI.
M ga-akụ gị na ịnyịnya ibu gị. O NA-EME M? N'ezie? SO HANY HA mmerɛw? ANYI AMAGHONE.ỌDONE NA-AD LKAR BO KA NWOKE NWA OKA NA-EWERE N’IHU IRMIRAKA.
Nwata nwoke nke pere mpe, tụfuru bọl ahụ ka ọ na-aghọta. Nke a bụ ụgbọ okporo ígwè. Nwatakịrị ahụ dị ka ọ bụ naanị na-anwa ngwa ngwa.Mgbe nwa agbọghọ ahụ kwuru na ọ bụ gị.
O nwere ikike ikwu na amaghị m ihe kpatara ya. Nke a bụ ihe na-akpali mmasị na-eme ihe niile na mba ahụ, nke a nwetara ezigbo na Facebook ma anyị ekerịta oge 180,000. A H VR A YA IWU Ọtụtụ nde oge.
O NWERE MILI 3. Gịnị ka ihe ndị a na-ekwu banyere anyị? Vidio Na-eju Anya. IWU NA-AB WHA EBERE.
OFFỌD OF NA-EGO, Ọ KPỌRỌ AKW THISKWỌ A. NKE AKW ABKWỌ BANYERE 11,000 THUMBS. Ọzọ na-asị, 'M na-eche banyere ọnọdụ, ime ihe ike adịghị mma, DENKIS KAT THAT NA-AZA NA-AJỌ ỌJỌ ỌJỌ.
N ’O B AR A NWAANY R AZA AHA G,, WILL̀ GA-EWEP HTA Ya? ”DONALD TRUMP NA-EBE Vidio A. Enweghị m ike ịme ikpe n'ihi na CAMERA - M nwere ike 'ikwu ihe ọ na-eyi. Anyi ekwesighi ikwu okwu.
KAS S KWURU NA Ọ B YOUR EB YOURGH TO TOB TO F KWES FR F UCBUCR THEY HA B NOT B C ỌB C. Ọ D NOGH NO Mmejọ Ebe a. Echere m na e nwere ọtụtụ njehie.
Enwere mmejọ na ụmụ agbọghọ ụmụ nwanyị na akụkụ ụmụ nwoke. O kwesiri itu ya bọọlụ? MBA. Ndi otu abuo enweghi ike ighota ebe a.
M ga-agbakwunye ụdọ, ihu ya mere ma kpatara mbibi na-emebi emebi site na ihe anyị na-ahụ, wee gwazie ya sị, '' ga-enweta nke ahụ. ' MA HA B CH CHM .AKA. YOU ghaghị ịma na ọ na-egwuri egwu.
LMY NWAANYY ANYA Adabaghị. Ọ KWES FR F IME GI N ’N’IHI NA Ọ B A Nwata nwanyị. BịANụ, IN HAVEAGH THIS A.
NA-EGO ỌMA. BRBE na nwata a arụọla ọrụ n’ọrụ gị, anyị amaghị. Ọ BR IT NA Ọ B A SMB NERIGH AKW YOUKWỌ YOU P YOUR KN KNMATA, Ọ B OTHER Ọ B A NA Ọ B CH NWA NA-EBUGH I'M B TR TRB DREC ECBECR WHAT WHATB WHATR HA.
Ọ B IFR YOU na ị bụ okenye na-awakpo. HEY, KAY S S EB DONN TO BK EBU NWOKE B WAS N’ TB TRLE N’LEB TRLE N’ TLỌ MMA, MA Ọ B B NA HA B NOTGH AD ND AD Okenye, HA B CH CHM THATAKA Ihe Na-eme 1 Nde Oge America Ma Ọ Na-eme N’Obodo Ọha, ị na-eme vidiyo? Ọ dị ka ọ mere ụfọdụ ụdị aghụghọ BASKETBALL MOVE. IHE Ọ NA-AMAGH KN AMA.
Akụkụ m kacha amasị m bụ nnukwu enyi m nke bidoro na-agba ọsọ. O RUOO N’OKUO N’ILE. GA-EME ỌZỌ Ọ B YOUR YOU NA WAT NA-ECHICHE VIDIO ONLINE
Ọ BURNR AND NA Ọ DEM KA Ọ KWURU 'OH SHIT'.Ọ BIF M B THE NNA MERE NT OFTA KW THR THE ALLBALLL B, M GA-EKWU, LEE Ihe a dị egwu. M K BTA Nwa m wee gbalịa weghachi nne na nna nwa agbọghọ ahụ.
A NA-Apụghị A. Ma nke ahụ abụghị ihe dị mkpa maka mba niile n'etiti nne na nna na nwata na ndị ọrụ. NT REKWU ND CH ỌM WASM WAS NA-EBU ỌR AND NA ỌR SC, Ọ B NOGH ALL IHE Ọ B ALL. .EBUGH AB ECHEB WHATR WHAT N'WELỌ B WE N'WEBECR OR MA Ọ B WHAT NT THEKWU OKWU ANY O.
ANY J NA-ELE ANYA vidiyo wee banye. Ọ D AWGH AW Mmata, n’oge, na-eche echiche otú anyị ga-esi na-achịkwa ibe anyị .Mgbe Lelee ihe na-eme na okpuru nchịkwa nsogbu e nwere.
Anyi agaghi adi okenye mgbe ihe di otua mere m. Anọ m n'ogige ahụ, ahụrụ m onye ọ bụla na HISBIKES ma na-agba m ịnyịnya. M KWURU SOMLỌ KWURU, Ọ KWURU SOMFỌD,, M AB NOTGH WHAT IHE, M KWERE NA M SI NA-enye ya aha njirimara na ụdị iwe iwe, Ọ KWURU NA-EGO gị, N'AGB THE B THE NERF NA Ọ B AS Ọ B IFR IF M B A ỌB AR PR NT PRTA NTOFTA NA NA Tụọ ya n’ụzọ ziri ezi na ihu ya.
Ọ na-efepụ igwe kwụ otu ebe na m dị ka OH SHIT, M nwere ezigbo ogwe aka. MA MGBE AH I M NA-AD BRAD ỌJỌỌ n'ihi na echeghị m na enwere m ohere ịkụda ya. Achọrọ m ka m tụfuo ya ruo ụbọchị a ka m na-eche.
Ọ B IM IME. EBERE m enyi a. N’AGBANYEGH,, M NA-ECHETA N’IHI NWA AH D MERE.
Ọ B EX Kpọmkwem Ihe m mere weghachi. N'EZIE.
Bikgba ígwè ịgba ọsọ ụkwụ gị ọ bụla?
Ihe calorie na-ere makaịgba ígwèenyere akaebughibunke giụkwụ, n’agbanyeghi na igba oku calorie n’ahu gi niile. Iji hụ na ị na-eji akwara ụkwụ gị maka ntachi obi - nke na-ebelata abụba - na-agba ọsọ ọsọ n'etiti mgbanwe 80 na 110 kwa nkeji (rpm). Nke a bụ pụtara ngwa ngwa.June 6. Dec 2019
Cycgba ịnyịnya ígwè ọ na-enye gị afọ dị larịị?
Ee!Cangba ígwè nwere ikeEnyemakagịinwe aewepụghị afọ. Manaị nwere ikegbaa abụba na ntopute ahụ siteịgba ígwè.Cygba ígwèbụ ihe dị egwu kalori na-ere ọkụ na-eme mmadụ 130-paụndnwere ikegbaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ calorie 600 n'otu awa nke ịgba ịnyịnya siri ike.
Kedu ihe igwe ọkpọ pụtara?
aha, noun. (psychology, euphemistic) Onye nwere oria ojoo, nke a na-ejikarị eme ihe mgbe o na-atule ngwa ngwa nke mgbanwe uche. Nwa m bu obubu-onuigwe gbara okirikiriKedubuọ na-esiri ndị mmadụ ike nghọta. aha, noun.
Kedu ihe dị iche n’etiti ịgba ígwè na ịgba igwe?
Cygba ígwèndị na-anụ ọkụ n'obi na-ezo akandị na-agba ígwèdị ka ndị na-agba ịnyịnya aokirikiri, nke nwere ike ịbụ aigwema ọ bụ ụdị ọ bụla nkeokirikiri. Ha na-ejikwa okwu ahụ eme iheịgba ígwèdị ka omume ma ọ bụ egwuregwu.Igwedị ka ihe na-eji okwu ahụ eme iheigwe kwụ otu ebena-ezo aka omume nke ịnya ụgbọ alaigwe.07/31/2020
Kedu ka ị ghara ichefu otu esi agba ịnyịnya ígwè?
Ọ bụ na-amaghị ihe na ebe nchekwa na-enyere anyị aka ịghọta otú stof ọrụ. Ozugbo mmadu mutara otu esi eme yagbara ịnyịnya ígwè, ha nwere ikeechefukwalaọ n'ihi na ọ na-echekwa n'ime usoro nchekwa. Ebe nchekwa usoro nwere iji ihe (gụnyere ihe egwu), yana mmegharị ahụ (dị ka ịpị ihe). Nọvemba
Ọ bụ eziokwu na ụmụ nwanyị hụrụ ọgba tum tum n'anya?
Ndị na-anụ ọgba tum tum ahụla anya ịrị elu nke ụmụ nwanyị ndị hụrụ ịnya ịnyịnya n'anya. Dabere na Council Motorcycle Industry Council (MIC), ọnụ ọgụgụ ụmụ nwanyị ndị nwere igwe kwụ otu ebe ejirila ihe karịrị okpukpu atọ n'ime iri afọ atọ.
Foto ole ka ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè nọ n'ebe ahụ?
Nwa agbọghọ 124,447 na-agba ịnyịnya ígwè foto foto, vektọ, na ihe osise dị na-enweghị eze.
Wasnye bụ onye mbụ a ma ama na-agba ọgba tum tum?
Angelina Jolie bụ onye hụrụ ọgba tum tum n'anya ogologo oge, wee nata MV Agusta na-acha uhie uhie dị ka onyinye maka ụbọchị ọmụmụ 35th site na ex Brad Pitt. Na 2008, Sports Illustrated supermodel ghọrọ onye hụrụ ịnyịnya ígwè n'anya Marisa Miller ghọrọ onye na-ekwuchitere onye mbụ na Harley-Davidson na 2008, na-enyere aka ịmalite VRSCF V-Rod Muscle motorcycle.